> Resource> Naghachi> Olee naghachi ehichapụ Photo & Video si Nokia N8 / N9
Nokia N8 / N9: naghachi ehichapụ photos na faịlụ
M na-agbalị ime ka a ọhụrụ album na foto si menu otú m nwere ike idebe ihe nile m fav ke kiet ke otu nchekwa.
M depụtaghachiri eserese nile ka ALBUM ọhụrụ na nchekwa ma mgbe ahụ ehichapụ otu eserese nile nchekwa ma na-akpaghị aka niile eserese na ọhụrụ nchekwa ọkọdọ-ehichapụ.
Nọmalị niile na ekwentị Nokia usoro a na-arụ ọrụ na-enweghị ihe ọ bụla prob. Olee otú m ga na-ehichapụ eserese azụ m nchekwa?
Ihe mbụ i kwesịrị ime bụ ịkwụsị etinye ọhụrụ faịlụ na ekwentị gị. Ndị ehichapụ foto ndị ka recoverable, ọ bụ ezie na ị pụghị ịhụ ha n'ebe ọ bụla. Ma ọ bụrụ na ị na-etinye ọhụrụ faịlụ na, ha ga-overwritten, na mgbake ga-aghọ siri ike. Iji weghachite ehichapụ photos, video na ọdịyo si Nokia N9 ma ọ bụ N8, gị na mkpa a Nokia N8 / N9 mgbake ngwá ọrụ, nke nwere ike ime ka ị na-ahụ azụ furu efu faịlụ mfe.
Naghachi ehichapụ foto & vidiyo si na Nokia N9 / N8
Get a ọkachamara mgbake ngwá ọrụ: Wondershare Photo Iweghachite, ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac
Ma nke foto mgbake omume Njirimara mma ndakọrịta na Nokia N9 na N8. Nke a foto mgbake nwere ike inyere naghachi ehichapụ, formatted ma ọ bụ keerughi photos, videos na songs dị mfe 3 nzọụkwụ. Ke adianade do, ọ na-akwado ndị ọzọ usoro nke Nokia igwe.
Gbalịa free ikpe mbipute a Nokia N8 / N9 mgbake software ugbu a. Dum soution na-ewe 3 nzọụkwụ.
Step1. Jikọọ gị Nokia N8 ma ọ bụ N9 na kọmputa
Ka malitere, jikọọ gị Nokia N8 ma ọ bụ N9 na kọmputa na a dijitalụ USB, ma ọ bụ wepụ na kaadị ebe nchekwa na jikọọ na ya na a kaadị agụ. Mgbe ahụ malite usoro ihe omume ị na arụnyere, na pịa "Malite" button na isi interface.
Step2. Ike iṅomi ehichapụ photos, videos si Nokia N8 / N9
Nzọụkwụ 2 bụ họrọ ekwentị Nokia gị, nke na-emekarị-egosi dị ka a mbanye akwụkwọ ozi I. Ọ bụrụ na ị chọrọ naanị naghachi ehichapụ foto ma ọ bụ vidiyo, ị nwere ike nụchaa Doppler N'ihi site na iji "iyo Nhọrọ". Wee pịa "iṅomi" na-amalite.
Step3. Naghachi Nokia N8 / N9 faịlụ na otu click
Rịba ama: Unu ịzọpụta natara data na gị Nokia N8 / N9 ma ọ bụ na kaadị ebe nchekwa ọzọ. Chọta ebe ọzọ n'ihi na ọ dị ka na kọmputa gị ma ọ bụ ndị ọzọ na mpụga disk, maka nchekwa hà.
Video nkuzi nke na-agbake foto site Nokia N8 / N9
Olee otú Naghachi ehichapụ Pictures si HTC Ịrịba